Chikamu cheKushandisa mu Photoreading. Ndeapi mafoni ekushandisa ekushandisa | Linux Vakapindwa muropa
Ichi chinyorwa ndechekupedzisira kwe akateedzana yakatsaurirwa ku Photoreading uchishandisa mahara software. Ndiyo nzira inogadzirwa nenyanzvi yezvidzidzo Paul Scheele inoona kukwanisa kuwedzera kumhanya kwatinoshandisa ruzivo rutsva.
1 Iyo yekumisikidza danho mune iyo Photo-kuverenga nzira
1.2 Omni Zvinyorwa
Iyo yekumisikidza danho mune iyo Photo-kuverenga nzira
Paul Scheele anotarisira kusimbisa izvo mashandiro ekushandura anosiyana nemaitiro ekuyeuchidza. Iye anozvitaura mupfungwa yekuti kuyeuka kudzokorora zvinyorwa sezvazviri. Kumisikidza kunotibvumidza kuwana zvinoreva izvo zvaive photoread asi tichishandisa edu mazwi. Kune mhando mbiri dzekumisikidza:
Kuzvibata kwekuita: Vamwe vanozvidaidza kuti Aha nguva! Iko kana tichiita chero chinhu chipi zvacho isu tinowana mhinduro kuchinetso kana isu tichiuya nehukama pakati pemifungo mitsva nedzimwe dzatakatove nadzo.
Chinyorwa kana chekuzvidira activation: Mune ino activation isu tinopindira. Izvo zvinoitika mushure menguva yekuzorora kubva padanho rekuverenga Photo. Iko kunosimudzwa kwemaminetsi makumi maviri ekuzorora, asi akakodzera maawa makumi maviri nemana akakumikidzwa kune chero chimwe chiitiko chingasanganisira maawa ekurara.
Chikamu chekusimudzira chinotanga Kutibvunza mibvunzo nezve chinyorwa chatakatora mifananidzo. Izvo hazvina basa kuti isu hatirangarire mhinduro munguva pfupi. Tichaona mune akati wandei maitiro ekugadzirisa izvi.
Mibvunzo yatinobvunza zvine hukama nechinangwa chekuverenga yakagadzwa muchikamu chekutanga. Mienzaniso yemibvunzo inokosha ndeiyi:
Chikamu chei cheicho chandinoverenga chinogona kushandira chinangwa changu?
Chii chandinofanira kutora mukutarisa bvunzo
Ndedzipi pfungwa dzandinofanira kubvunza mudzidzisi nezvadzo mukirasi?
Ndingaite sei zvandinoverenga.
Ini ndinowanzoita nhanho iyi nekunyora mibvunzo ini ndichifamba rwendo rwechifambiso cheveruzhinji kana ndinofanira kumirira kwenguva yakareba uye, nekuda kweizvozvo, ini ndinoshandisa foni uye imwe yeaya akavhurwa sosi yekushandisa yeApple yandinonyora pasi mibvunzo.
Gore rino ndakafunga kurega kushandisa Microsoft OneNote uye kuitsiva neakavhurika sosi yekushandisa yakafanana mashandiro Izvo zvakandibvumidza kuti ndiwane Carnet. Carnet ndeye Multiplatform manotsi kunyorera iyo inokutendera iwe kuwiriranisa uchishandisa maseva avo kana yako yega server ine Nextcloud yakaiswa.
Mamwe emabasa eKadhi ndeaya:
Icho muchinjikwa-chikuva. Iyo ine shanduro dzeLinux uye Android. PaWindows neMac inogona kushandiswa kubva kubhurawuza.
Iyo mobile vhezheni inokutendera iwe kuti ugadzire zvinyorwa zvemanyoro uye kubva kumakrofoni kana kamera.
Iyo desktop vhezheni inokutendera iwe kuendesa manotsi akagadzirwa neGoogle's Keepnotes application.
Inogona kuvhura html mafaera.
Manotsi anogona kupihwa mavara akasiyana.
Manotsi anogona kurongwa nekutsvaga uchishandisa mazwi akakosha.
Mupepeti anotsigira akashinga, akadonhedzwa, italic, uye akajekesa zvinyorwa
Iyo purogiramu ine yakasviba theme
Kunyangwe Carnet iripo mu chitoro, haisi iyo yazvino vhezheni. Zvakanakisa kurodha pasi muApplication fomati. Iwe unongofanirwa kupa mvumo yekuuraya uye tinya kaviri pane iyo icon. Kana iri yefoni vhezheni, inogona kutorwa pasi kubva ku chitoro chegoogle kana kubva F-Droid. Iyo yewebhu vhezheni yekushandisa kubva kubhurawuza inogona kuwanikwa pa iyi link
Mune ino kesi isu tinotaura nezvayo An Android-chete Anwendung. Inogona kutorwa kubva Chitoro cheGoogleo kubva imwe nzira F-Droid chitoro.
Vagadziri vanoona kuti kunyorera kwavo kunoenderana nemafoni ekare uye shanduro dzekare dzeAroid.
Omni manotsi haasati apa kugona kuyananisa manotsi pamhepo pakati pekushandisa. Asi, zvinogona kuitwa panyama nekuita backup.
Ziva kusika, kugadzirisa uye kusefa mabasa kunoitwa uchishandisa Chinyorwa Dhizaini interface.
Kupatsanurwa kwemanotsi uchishandisa ma tag uye zvikamu.
Chinyorwa, izwi, mufananidzo uye mamwe mafomati anogona kubatanidzwa.
Izvo zvinokwanisika kugadzira ku-kuita zvinyorwa
Manotsi anogona kugadzirwa nekudhirowa nemunwe wako pachiratidziri.
Iyo yekushandisa interface inoshandurwa muchiSpanish.
Chirongwa ichi chinopa mukana wekuisa mapfupi kumanotsi pane chikuru skrini.
Omni manotsi akabatanidzwa neGoogle Izvozvi.
Munyaya inotevera tichaona kupindura kwatinoita mibvunzo yatinozvibvunza. Icho chichava Superread.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chikamu chekumisikidza mu Photoreading. Android openource kunyorera kuzviita